21 Xeerar oo loogu talagalay Istaraatijiyadaha Warbaahinta Bulshada ee wax ku oolka ah | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 19, 2013 Talaado, Nofeembar 19, 2013 Douglas Karr
Ma jecli erayga "xeerar" markay tahay Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada, laakiin waxaan aaminsanahay inaan leenahay khibrad nagu filan iyo daraasado kiis si aan u fahanno meesha shirkadaha runtii ay qabteen shaqo weyn iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada oo runtiina ay afuufeen. Infographic-kaani wuxuu qabtaa shaqo cajiib ah dejinta xoogaa filashooyinka iyo tilmaamaha ah marka ay timaado horumarinta istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada.
Sida wax kasta oo kale, waxaa jira sharciyo aan qornayn oo ku lug leh suuqgeynta warbaahinta bulshada. Qof walba waxaa waajib ku ah inuu raaco sharciyadan, laakiin kuwa ku cusub ciyaarta waxaa laga yaabaa inay seegaan aasaaska. Halkan waxaa ah 21 sharciyo aan qornayn ee suuqgeynta warbaahinta bulshada oo loogu talagalay inay abuuraan aasaas adag oo loogu talagalay olole kasta oo suuqgeynta warbaahinta bulshada ah.
Infograafiga waxaa soo saaray Qiyaasta Bulshada Pro, plugin WordPress ah oo la socota tweets, like, pin, + 1s iyo wax badan oo sax ah oo ka socda Dashboardkaaga WordPress!
Tags: infographicxeerarka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographicxeerarka warbaahinta bulshada
rochest suuq geynta warbaahinta bulshada
5, 2013 at 2: 50 AM
Runtii aad iyo aad u fiican post .Waad ku mahadsan tahay macluumaadkan waxtarka leh.
Adeegyada Adeegyada SEO
Runtii waa qoraal aad u fiican oo laga ogaado "Infographic: 21 Rules for Strategic Media Strategies", waad ku mahadsan tahay macluumaadka ..
Suuqgeynta Hoteelka Internetka
Hagaag, warbaahinta badan ayaa si fiican u shaqeysa maxaa yeelay dadka adduunka oo dhan waxay arkayaan adduunka oo tuuraya falsafad kale oo sax ah iyo liis wadaag ah ..
Baloog wanaagsan, oo lagu dhajiyay qaab hal abuur leh si loo fahmo.
Qoraal dheer, miyaan tarjumi karaa macluumaadkaaga oo aan daabici karaa?
Waxaan joogaa gobol leh af isbaanishka sidaa darteed way fiicnaan laheyd inaan ku helno afkeena hooyo.
Mar 1, 2016 at 12: 43 PM
Dabcan! Kaliya iska hubi inaad amaan siiso daabacaha asalka ah halkii aan aniga ahaan lahaa.